UGAAR AH RAGGA: 5 Qaabood oo aad ku heleysid Gabadha aad ifka ugu jeceshahay - Aayaha
Haddii aad dooneysid gabadha riyadaada ah inaad u noqotid mid ay iyadana ku riyooto, fadlan raac tilmaamahan.
Isku diyaari inaad saaxiib la noqotid
Rag badan diyaar uma ahan inay saaxiib la noqdaan naagta ay rabaan, daacad haddii aanka hadlana waa qalad arrintaas, maxaa yeelay way ku diiday ma ahan sabab looga tago, saaxiib la noqo waxana ugu dambeyn kugu guuleysaneysaa qalbigeeda marka ay ogaato inaa tahay qof wanaagsan.
Ballan qaad aadan ka bixi Karin ha u sameyn
Ragga farabadan ayaa beer dareeya fursadda ay ku heli lahaayeen haweeneyda ay jecelyihiin sababtoo ah waxay ku fashilmaan ballanta ay ka qaadaan, dhaqankaan waa qalad wuxuuna kaa fogeynayaa gabadha aad jeceshahay, baro inaad isxakameysid oo ballan been ah haka qaadin.
Noqo mid jeebkiisa wax uun ay ku jiraan
Waa inaan kuugu daraa tan sababtoo ah intabadan ragga waxay aaminsanyihiinin haweenka ay u baahanyihiin nin dhaqaale badan heysta oo kaliya, kuma weydiinayso inaad taajir tahay balse waxaa wanaagsan inaad noqotid nin xakameyn kara ganacsigiisa dhaqaale ahaan, ma jirto naag rabta nin mar kasta u orda hooyadiis marka uu dhaqaale u baahdo, shaqeyso oo is dabar , waa intaas inta ay kaa rabto.
Noqo mid xushmad badan
Marka aan iraahdo xushmad badan, ulama jeedo kaligeed ayaa xushmeyneysaa, haweenka way jecelyihiin ragga wanaagsan ee si guud u xushmeeya ragga marka waxaad u baahantahay inaad dhaqanka xun meel iska dhigtid oo aad dadka xushmeysid.
Xusuuso maalmaha kuweyn
Inaad xasuusatid maalmaha qaaska u ah waad uga badineysaa, maxaa yeelay ma shukaansaneysid micnaheeda ma ahan inaadan haye dhihin seetahay, isla markaana aad hadiyado u keentid dhalashadeeda.